Sakavilany Toliara II: Taksiborosy nivadika, olona roa maty, zandary ny iray | NewsMada
Sakavilany Toliara II: Taksiborosy nivadika, olona roa maty, zandary ny iray
Olona roa maty (zandary ny iray) vokatry ny lozam-piarakodia tao Sakavilany Toliara II, ny zoma tolakandro teo. Olona miisa 15 kosa naratra mafy ka isan’ireo naratra koa ny zandary roa. Niala tampoka teny am-pandehanana ny fitoerana entana ka nahatonga ny loza…
Taksiborosy avy any Ankazoabo hihazo an’i Toliara ity namoa-doza ity, 75 km mialoha ny hidirana ny tanànan’i Toliara no nitranga ny loza teo amin’ny fokontany Sakavilany Andranovory. Nisy zandary telo lahy nandeha tao anatin’io taksiborosy io hihazo an’i Toliara. Araka ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana, ny antony nahatonga ny loza, niala tampoka ny fitoerana entana tao ambon’ilay taksiborosy raha iny nidina fidinana iny ka nisarika ilay fiara nivadibadika intelo ka latsaka tany anaty lavaka. Vokany, maty tsy tra-drano ny zazavavikely iray telo taona sy zandary GST iray miasa ao amin’ny borigadin’i Tandrano. Olona miisa 15 hafa naratra mafy ka isan’izany ireo zandary roa lahy. Tampoka ny fitrangan’ny loza ka tsy nisy azo natao mihitsy, araka ny fanazavan’ireo mpandeha.
Nalefa haingana any amin’ny Hopitaliben’i Toliara ireo naratra. Nalefa any amin’ny fari-piadidin’ny zandarimariam-pirenena ao Toliara kosa ny fatin’ilay zandary.
Fa olona fito koa naratra mafy vokatry ny fahatapahan’ny frein-n’ny kamiaobe iray tao amin’ny toerana antsoina hoe Bongalemanja Fiherenana, ny zoma tolakandro teo ihany. Nitondra trondro maina telo taonina sy olona 10 ity kamiaobe tapaka frein tao anaty fiakarana ilay fiara ka nihemotra tampoka ary nivadika. Nalefa any Tsiroanomandidy ireo naratra.